musha nyika dzakabatana Singers Camila Cabello Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican-Cubaanbhi ane zita rekuti "Camz". Yedu Camila Cabello Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Iyo kuyerera kwenyaya inosanganisira yake yehupenyu hwepakutanga / yemhuri, kudzidza / basa rekuvaka, hupenyu hwebasa repamberi, nzira yekurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwega, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye muimbi mukuru, munyori wenziyo uye mutambi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Camila Cabello's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Camila Cabello Mhuri Yekumashure Uye Hupenyu hwepakutanga:
Camila Cabello ane zita rizere Karla Camila Cabello Estrabao akaberekwa pazuva re3 raKurume 1997 kuna amai vake, Sinuhe Cabello, uye baba, Alejandro Cabello muHavana, Cuba. Ndiye wekutanga pavana vaviri akazvarwa kuvabereki vake vakanaka vepakati.
Camila Cabello Vabereki, Alejandro, uye Sinuche.
Muimbi ane runyararo ane mhuri yake YAKABVIRA kubva kuUnited States asi vanobva kuCojímar, guta riri muEast Havana, kudenga kune mabasa ehuku. Sezvacherechedzwa kubva pamepu, Cojimar iri pamhenderekedzo yegungwa yeMexico. Nechirevo, tinogona kutaura kuti Camela Cabello midzi yemhuri inogoneshwa kuenda kuMexico.
Kungofanana nechero celeb ine mukurumbira, akabva kumhuri yakashata yemhuri uko vabereki vake vainetseka mune zvemari munguva dzekutambudzika. Kuti uwane mabasa ari nani uye utore zvinokura zvemhuri zvinoda, vabereki vaCamila Cabello vaifanira kufamba vachidzoka pakati peHavana neMexico City. Kunyangwe paine kurwira kwekutanga, imba yese ichiri yakaramba iri padhuze uye ichifara unit.
Kuti ubhadhare zvikwereti uye umhanye mhuri yake, Alejandro, baba vaCamila vakatanga kugeza ca
rs pane imwe nzvimbo yekutengesa iri pedyo. Amai vake vakatsigira mhuri nekushanda semubatsiri wemuchitoro. Mukuenderera kwavo kutsvaga kutsvaga mikana iri nani yevana vavo, vabereki vaCamila Cabello vakawana mukana wekutamira kuMiami, Florida, muUnited States.
Camila Cabello Dzidzo Uye Basa Kuvaka:
Paaive kuFlorida, Camila akaenda Miami Palmetto High School iyo yakamupa mukana wekuongorora izvo zvaanogona. Akagadzira tarenda rake rekuimba mukati memazuva ake ekutanga echikoro. Camila akacherechedzwa kuve akazvipira kuita kuimba yekuimba sezvo aizoenderera mberi nekudzidzira zuva rega rega pakati pevaanofarira veukirasi uye vadzidzisi. Aive akasarudzika kubva kune vamwe nekuda kwezwi rake rakasiyana-rakadzika uye Cuba- Mexico yekuremekedza izvo zvakaita kuti kuimba kwake kwakanakidze kuona.
Tarenda akauya nechinonetsa sezvo mudiki Camilla aive musikana anonyara. Nekufamba kwenguva, akakunda nhanho yake achitya nekuda kweiyo mutambo waaida kwazvo. Izvi zvakamuona achifambira mberi kuita runyoro rwekutanga basa.
Rwendo rwaCamila kumaroto ake emimhanzi akatanga kugashira kuzara achiri mudiki. Achiita zvakange zvaitwa nemamwe ma greats, weCuba wekuAmerica uyo kwenguva zhinji ainyepedzera kufara nenyaya dzechikoro, akaita danho rekumisa chikoro kuti aite basa rake rekuimba.
Kusiya chikoro cheMimhanzi ndisina vimbiso yekuchiita chikuru yaive yakaoma sarudzo yekutora. Nekudaro, Camila aiziva kutsunga kwake kuita kuti rive hombe mumimhanzi raisave chero munzira, fungidziro inopfuura. Mushure mekusiya zvidzidzo zvake, akatanga kupa nguva yega yega yenguva yake yekudzidzira pamwe chete nechinangwa chekuwana mikana yekuwongorora.
Camila Cabello Road To Fame Nyaya:
Zvishoma nezvishoma, kuedza kwake kwakatanga kubereka. Camila akashevedzwa kuti aongororwe nezve X-factor muna 2012, imwe nguva aive angori makore gumi nemashanu ekuzvarwa. Kubviswa mukati mebogi remusasa kwakave chikomborero mukuzvivanza. Panzvimbo pekusiya achinyara, Camila akadaidzwa kudzoka kuchinhanho nevamwe makwikwi mana kugadzira boka revasikana Fifth Harmony. Pamwe chete, vakabatana uye vakaenderera mberi kupedza wechitatu mumakwikwi, rwiyo rwakachinja shanduko pabasa rake remimhanzi.
Mushure mekuratidzwa, Camila akatanga kusereka zvine mutsindo pabasa rake senhengo yeboka revasikana Fifth Harmony ine; Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, naLauren Jauregui. Boka rakatora chikamu chinotevera chebasa ravo nekusaina chibvumirano chakabatana neSyco Music, yaive yaSimon Cowell.
Camila Cabello Kakwira Kuzivikanwa Nhau:
Anoshamisira akasimuka mukurumbira apo iye nebhendi-vakaroora vakaburitsawo mutambo wekutamba uye ma studio maviri akazviona ari mukati megumi pamusoro peBillboard 200 muUnited States.
Kugadzira imwe sarudzo hombe sezvaanowanzojaira, Camila akatyisidzira vateveri vese veFifth Harmony musi wa 18 Zvita 2016, zuva raakafunga kuenda ega, achisiya boka rechishanu Harmony. Asina hanya nezvengozi, akambotaura mumashoko ake mushure mekusiya boka;
"Zvisinei nezvingaitika, ndiri kutevera moyo wangu, ndinovimba kukuonai mese murwendo rwangu."
Achienderera mberi, Camila akagamuchirwa kujoina iyo Bruno Mars 24K Magic World Tour seyakavhura chiitiko. Akaita huwandu hwese makumi maviri anoratidza. Akaburitsa yake hit single 'Havana' muna Nyamavhuvhu 20, 3, sechipo kune vateveri vake. Iye wekutanga mukuru asina kuroora pasina nguva akazova hit. Waizviziva here 'Havana' yakarova # 2017 pane Hot 1 Billboard, # 100 muUK Official Charts uye # 1 paTunes.
Kubudirira kwake kweHavana hakuna kungomira ipapo. Munguva ye2018 MTV Vhidhiyo Music Awards, Camila akatora kumba Vhidhiyo uye Artist yegore mubairo. Panguva yekunyora, musikana-wenguva-imwe musikana kubva kumhuri yakashata yemhuri ikozvino akavhoterwa zvakanyanya semumwe wevanyori vevakadzi vepamusoro. Vamwe vese, sekureva kwezuva, yave nhoroondo.
VERENGA Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Camila Cabello Hukama Hupenyu:
Nekusimuka kwake kune mukurumbira wepasirese, vateveri vazhinji vakashamisika kuti mukomana waCamila Cabello angave ani kana kuti ane murume. Chokwadi ndechekuti, haana kuroora panguva yekunyora uye anga achidanana nevamwe vanozivikanwa vechinzvimbo chake.
Ukama hworuzhinji hwehukama hweCabello hwaive hwekuti nemukurumbira kufambidzana nemubati uye munyori Matthew Hussey, waakasangana naye pane anozivikanwa Nhasi Show. Vese Vakomana veMusikana nemusikana vakadanana kubva munaFebruary 2018 kusvika munaJune 2019 vasati vatanga kurambana.
Senguva yekunyora, Camila Cabello ane mumwe mukomana. Kubva munaJuly 2019, anga achidanana nemukurumbira wechiCanada Shawn Mendes. Hukama hwavo havana munguva pfupi yapfuura vakapukunyuka kuongororwa kwemaziso eruzhinji. Sekureva kwevamwe vateveri, Camela nemukomana wake, Mendes anopomerwa mhosva yekuumba hukama kuti awane mukurumbira pasi rose.
Camila Cabello Hupenyu hwepamoyo:
Kusvika pakuziva hupenyu hwaCamila Cabello kure nebasa rake chokwadi kwaizokubatsira kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake.
Camila ane hushamwari uye anoda kushamwaridzana nevanhu vanobva kumakirasi ese uye nemabasa ehupenyu. Zvakare, haazvibati, anogara achida kubatsira vamwe, asingatarisiri kuwana chero chinhu. Nekuda kwehunhu hwake hwekudyidzana, akashanda pamwe neSave the Children kuti vagadzire rakatemerwa T-sheti "Yekuda Nguva Dzose" kubatsira kusimudzira kuzivisa nezvenyaya dzinosanganisira mukana wakaenzana wevakadzi kumabasa, kuchengetwa kwehutano nemukana wekugona.
Zvakare paCamila Cabello Yemunhu Hupenyu, iye anoda zvechisikigo anoda mabhuku ane bhuku hombe rekuunganidza mumba make. Sezvacherechedzwa pamusoro, iye anoona zviri nyore kushandisa rudo rwake kune mabhuku nevana. Padivi remamuvhi, iye aanofarira panguva yekunyora anoramba ari Harry Potter. Iyewo anoda mabhanana, vana, asi anotya kushambira uye shark.
Camila Cabello Hupenyu hwemhuri:
Nyaya yemhuri yaCamila Cabello yakadzidzisa vazhinji vechidiki nyeredzi vachishuvira kuwana hukuru uhwo 'nzira yakanakisa yekusava netariro ndeyekumuka uite chimwe chinhu'. Senge panguva yekunyora, Cabella Cabello akagadzira chikamu chemhuri yake kuenda kurusununguko rwemari, zvese nekuda kwebasa rake. Zvino, ngatipe iwe nzwisiso yakawanda kunhengo dzemhuri yake.
About Camila Cabello Baba:
Baba vaCamila Cabello ndiAlejandro Cabello. Iye akazvarwa pazuva re28th yaGumiguru 1968 kuMexico.
Alejandro akatambura kuburikidza nematanho ehudiki ehupenyu hwake. Akatanga semudzidzi wemotokari washer asati ave nesangano rake nekuda kwekubudirira kwemwanasikana wake.
Kuda kwaAlejandro kuna Camila Cabello hakuna anoziva, nekuti anogara achirovanisa mwanasikana wake pamukana wese wavanowana wekuve pamwe chete. Zvakare, rake peji re Instagram rakazadzwa nemifananidzo yemwanasikana wake Camilla Cabello.
About Camila Cabello Amai:
Sinuhe Cabello ndiye amai vaCamilla Cabello. Iye akazvarwa pazuva re25th raDecember 1968 kuCuba. Zvishoma zvinozivikanwa nezvemhuri yake. Nekudaro, isu takazoziva kuti amai vaSinuhe (muzukuru waCamila Cabello), mugadziri wemudyandigere muCuba akamboshanda kuMarshall kuUS kwaaidzidza.
Mushure mekutamira kuMiami nemhuri yake pakutanga kwehupenyu hwake, Sinuhe kungofanana nemurume wake akaita mamwe mabasa eMenial kungoita chokwadi chekuti Camila Cabello apinda chikoro cheveruzhinji chakanaka. Sinuhe akabatsira kwazvo kubudirira kweiyo tsvarakadenga yake diva uye anogara achidada kuti akazvara asina kukwana tarenda saCamila Cabello.
About Camila Cabello Sista:
Camilla ane hanzvadzi diki inonzi Sofia Isabella Cabello. Akazvarwa muFlorida musi wa 2 Kubvumbi 2007 (makore 11 mudiki kuna Camila).
Vese hanzvadzi vanogovana chisungo chepedyo uye chakasarudzika sezvinoonekwa mumifananidzo yavo pane avo enhau enhau. Sofia uyo ane zita remadunhurirwa rekuti "Mambokadzi Butterfly" akazove yekunzwa internet nekuda kwemifananidzo iyoyo Iko hakuna mitsara yekuti Camila Cabello ane chero hama.
Camila Cabello Mararamiro:
Kutanga, Camila Cabello ane huwandu hunofungidzirwa hwemamirioni gumi nemaviri emadhora panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwamazvikokota kunonyanya kubva pabasa rake remimhanzi uye madhiri mazhinji emvumo. Kusvika pakuziva Camila Cabello Lifestyle chokwadi chaizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo uri nani pane ake mararamire.
Kutanga kuenda, muimbi weHavana ararama hupenyu hwakajeka hunowoneka nyore nyore nedzimba dzake dzemamiriyoni emadhora iri muHollywood Hills, Los Angeles. Camila akatenga imba iyi pamadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemakumi manna kubva kuna mutambi weLigion akatendeuka kuigadzira Uday Chopra.
Mararamiro anonakidza aCamila anoonekwawo nekukwira kwake. Anotyaira mota dzinodhura dzakadai seLexus inodhura madhora zviuru makumi matatu nemazana mashanu uye yaanofarira Bentley Continental GT mutengo uri pamadhora 35,000 Hupenyu hwake hwepamusoro hwakasungirirwa mukuita kwake semuimbi uye munyori wenziyo.
Camila Cabello Untold Chokwadi:
Chitendero chaCamila Cabello:
Camila akakurira mumusha wechiKristu. Iye anorarama hupenyu hwemutendi kunyangwe asina kunyanya kuzvipira kune chikonzero.
Camila Cabello's Tattoos:
Camila isink-yemahara sep panguva yekunyora. Kunyangwe, iye ane zvirongwa zvekutora uta hwe tattoo pane yake pinky chigunwe, kana kuichengeta yakadaro.
Camila akambotaura kana asiri muimbi, angadai akada kusarudza basa sachiremba wemazino.
Tinokutendai nekuverenga yedu Camila Cabello Yehucheche Nyaya pamwe neisina chokwadi chokwadi. Pahudiki biography, isu tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisina Pook chaipo mune ino chinyorwa, ndokumbira utaure zvako kana kuti utibate!